Home Wararka Mareykanka oo digniin adag u diray Farmaajo iyo “Golahiisa” Shacabka (Mursal)
Mareykanka oo digniin adag u diray Farmaajo iyo “Golahiisa” Shacabka (Mursal)
Dowladda Mareykanka ayaa markii sadaxaad waxa ay digniin u dirtay Madaxweynaha waqtgiisa dhamaaday Farmaajo iyo Guddoonka Golaha Shacabka inay si degdeg ah u baabi’iyaan hindise sharciyeedka muddo kordhinta ahaa, kaasi oo horay Beesha Caalamka ay ka hortimid. Hadalka Mareykanka oo ahaa mid diblomaasi ayaa u muuqday in Maraykanka ay dhawaan qaadi doonaan talaabo looga soo horjeedo Farmaajo iyo kooxaha uu ku shaqeeysto.
Sida lagu sheegay Warka ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda dalka Mareykanka waxaa looga dalbaday labada Mas’uul ay meesha ka saaraan sharicigii Baaarlamaanku labada sano ugu kordhiyeen farmaajo, sidoo kalena uu Madaxweynuhu saxiixay. Sidoo kale Qoraalka kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Maraykanka ayaa lagu boggaadiyay Ra’iisul Wasaare Rooble Maxamed Xuseen Rooble, Madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabelle sidii ay u diideen muddo kordhinta.
Dhanka kale Waxaa loogu baaqay Madaxda dowladda Federaalka iyo dowlad Goboleedyada inay si deg deg ah u kulmaan si loo dhameystiro qaabka doorashada ee la isku raacsan yahay lana qabto doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha sida ugu dhaqsaha badan iyadoo lagu saleynayo heshiiskii 17 Sebtember.